साउन १४, काठमाण्डौ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान)को निर्वाचन मिति नजिकिदै गर्दा पर्यटन सम्बद्ध बर्गीय संगठनभित्र हल्लीखल्ली सुरु भईसकेको छ । जसरी भएपनि टान नेतृत्व हात पार्न स्वार्थ समुह तथा संगठनहरुको दौडधुप सुरु भैसक्दा शेर्पा पर्यटन व्यावसायी संघले पनि संगठनका तर्फबाट टानको नेतृत्वको लागि औपचारिक निर्णय गरीसकेको छ । संघका महासचिव पेम्बा संगम शेर्पाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित शेर्पा संघले उमेद्धवार घोषणा गरेको हो ।
…The Meeting of STEAN HAS been accomplished with some important conclusions. 1. We are going to participate in upcoming TAAN's election on presidential leadership of me Pemba Sangam Sherpa Rest of the Candidates will be following Senior vice- Wangchhu sherpa 1st vice - Furi G Sherpa 2nd vice- Gombu Sherpa GS - Ngawangima sherpa Secretery - Mingma T sherpa Treasure- Furba Sherpa Then Members will be decide soon 2. Collections of Fund 3. Deep Condolences for our second vice Mingmar Lamas own brother passed away. GS - STEAN
व्यावसायिक नेतृत्वको चर्चा चलिरहँदा बर्गीय संगठनका तर्फबाट नेतृत्वको अग्रशरता किन प्रश्न उठीरहँदा यसअघि भजाईएको सर्बसहमतिय नेतृत्व पनि खरानीको डल्लामा परिणत हुने निश्चीत देखिएको छ । टानको नेतृत्वमा शेर्पा संघको हतारो र अबको चुनाबी एजेण्डाका बारेमा कुराकानी गर्न गईरहेका छौ ।
टान नेतृत्वका लागि अध्यक्षका उमेद्धवार पेम्बा संगम शेर्पासँगको कुराकानीमा आधारित ।
समग्र पर्यटन व्यावसायको उथ्थान गर्न, अबैधानिक ट्रेकिङ अपरेशन रोक्नको लागि नै उमेद्धवारी दिएको हुँ । त्यो भन्दा बढि पर्यटनको प नजानेकाहरुको हालीमुहाली रोक्न । अहिलेसम्म सबै यस्तै नेतृत्वले खाए, अब यिनीहरुका दिन सकिए भनेर सन्देश दिन पनि हो ।
२. भनेपछि नवराज दाहालले पर्यटनको प पनि बुझेका रहेनछन ?
उहाँले अलिअलि बुझेको होला, उनका कार्यसमितीले बुझेकै छैनन, ठोकुवा गर्छु । दाहालले काम गर्ने शैली सिकेकै छैनन, के बुझेको भन्नु ।
३. चन्द्र रिजालले पनि बुझेका छैनन ?
उ त झन राजनीतिक पहुँच देखाउन आएका रहेछन । पर्यटन बुझेको मान्छे होईनन ।
४. तपाई लोभी पापी हो ?
होईन, किन ?
५. तपाई शेर्पा समुहको घेराभन्दा बाहिर निस्कन चाहनुहुन्न, हो की होईन ?
पर्यटन क्षेत्रको हिमायती शेर्पाभन्दा अरुले योगदान दिएकै छैन । शेर्पाको योगदानलाई बिर्सेर शेर्पाले कमाएको मात्रै देख्ने गैरशेर्पाहरुले आरिस गरेर पदयात्रा व्यावसायमा हात हाल्न थाले । फलस्वरुप पर्यटन लथालिङ्ङ अवस्थामा पुग्न गएको छ । बिदेशीले नेपालको ट्रेकिङ यात्रामा निस्कँदा शेर्पासँग मात्रै बिजनेस डिल गर्छन, यस्तोमा गैरशेर्पाहरुले पनि कम्पनीको नाम पछाडी शेर्पा जोड्ने अनि बिदेशीले शेर्पा हो भनेर सोध्दा .....या..याा भनेर ढाँट्छन, ढँटुवाहरु । यस्तोमा असली हिमालको छोरो शेर्पाले जति हिमालको बारेमा आयातित व्यक्तिले बुझेको छैन, हुँदैन । मेरो टिममा पनि ३५ बर्षदेखी पदयात्रामा योगदान पुर्याएका व्यक्ति छन, खारिएका व्यावसायिक टिम बनाएको हुँ, यसमा उहाँहरु उपयुक्त देखिनुभएको मात्रै हो ।
भनेपछि तपाई यसपटक हार्ने पक्का हो ?
हैन, मैले त जित्ने कुरा गरिराछु, कहाँबाट आयो हार्ने कुरा ।
तपाई हार्नुभयो भने पर्यटन क्षेत्र त्याग्नुहुन्छ ?
त्याग्दिन । मेरो अवधारणा बेग्लै छ । शेर्पा टोलीलाई एकत्रीत गरेर टानमा स्थापित गराउँछु ।
तपाई गैरशेर्पाको बिरोधी हो ?
बिरोधी भन्दा पनि पर्यटनको प नबुझेका टानको नेतृत्व हाँक्ने अनि शेर्पालाई चै सधै सदस्य, द्धितिय उपाध्यक्ष बनाएर फकाउने नियत बदलिनुपर्छ भन्नेमा हो ।
तर तपाईहरुलाई नेतृत्वमा जान कसले रोकेको छ र ? दाता र पाताको कुराले त दाशी मानसिकताको कुरा भएन र ?
अहिलेसम्मको स्थीति त्यस्तै देखियो भन्ने हो । त्यै भएर नै समग्र शेर्पालाई यसपटक गोलबन्द गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छौ ।
गणेश सिंखडाले यसपटक मेरो नाममा सहमति हुन्छ, अरु सबै हेरेको हेर्यै भन्नुभाछ, तपाई पनि रुनुपर्ने हो ?
उहाँले कसरी भन्नुभयो थाहा छैन, सबैले अनुमोदन गर्नुपर्यो, शेर्पा संघले भनेको छैन ।
शेर्पा संघले भन्नुपर्ने, निट, पर्यटन व्यावसायी संगठनलाई भन्नुपर्ने त होईन नी, १८ सय टानका भोटर मध्ये बहुमतले निर्णय गरे भने त कुरा सकियो नि हैन र ?
ठिक छ त, बहुमत पुर्याएर देखाउनुभयो भने स्वागत छ । धेरै हल्ला पनि गर्नुपरेन । उहाँहरुको हैसियत पुग्छ भने गर्नुस ।
भनेपछि पर्यटनको प नजानेपनि हैसियत पुग्यो भने यहाँहरु स्वीकार्नुहुन्छ ?
हैन, गणेश सिंखडा थोर बहुत पर्यटन बुझैकै होलान , तर माथिबाट टिका लगाएर आउने खालको नेतृत्व चै चाहिएन । त्यसो भयो भने धुलो उडाईन्छ ।
संगम शेर्पाले पर्यटनको ठेकेदारी गर्न सुहाउँदैन, तपाईको काम गाँजर, साग रोपेर अर्गानिक तरकारी बेच्नुस, हल्ला नगर्नुस, भन्नेहरु पनि छन नी ?
संगम शेर्पाले २२ बर्ष पर्यटनमा बिताएर कृषि र पर्यटन सँङसगै भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढेको व्यक्ति हो । गाँउगाँउमा पुग्ने पर्यटकलाई स्वस्थ अर्गानिक तरकारी खुवाउनु पनि पर्यटनकै एउटा पाटोको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नवराज दाहाल कस्तो मान्छे हो, नेतृत्वका हिसाबले ?
केही गरेको भएपो, बि हुनुपर्नेमा ए भएछ वा ए हुनुपर्नेमा बि भएछ भन्नेजति पनि उहाँले केही गर्नुभएन । उहाँ त ईतिहासकै निरिह अध्यक्ष हो । पहिला पहिला टानका अध्यक्ष भनेपछि जुनसुकै कार्यक्रममा सुरुमा भाषण गर्न दिन्थे, उहाँको कार्यकालमा त कार्यक्रमहरुमा जाँदा पनि वास्ता नै गर्दैनथे । बोल्न त दिदैनथ्यो आयोजकहरुले । ङिच्च हाँसेर कुनामा आसन ग्रहण गरेर मात्रै फर्किए । अँ एउटा काम चै राम्ररी नै गरे, अलिअलि भएको टानको गरिमालाई ध्वस्तै बनाईदिए ।